Hayso ururinta weyn ee filimada oo dhan qaab DivX / Xvid? Oo aad rabto inaad u daawado ee Apple TV laakiin aadan aqoon sida loo sameeyo? Waa hagaag, in halkan maqaalkan, waxaan inta badan ay sharxaan sida ay u badalaan XviD / Divx in Apple TV for loo maqli siman.
DivX / Xvid noqdo iyo aad u badan oo caan ah ay sabab u tahay awood ku cadaadisaa dheer video qaybaha galay tirada yar, iyada oo tayo leh muuqaal xad sare. Laakiin waa naxariista files DivX / Xvid ma noqon kartaa mid taageero TV Apple. Sidaasi darteed waa inaad si loogu badalo files DivX / Xvid in TV Apple qaab saaxiibtinimo. Halkan, si adag ayaan ku talin Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Sababtu waxa weeye app this si toos ah waxay bixisaa users ah pre-goob filaayo in TV Apple. Xitaa haddii aadan aqoon waxa format ugu fiican ee TV Apple, waxa kale oo aad si fiican u samayn kartaa in this DivX / Xvid in Apple Converter TV. Tallaabooyinka jira saddex kaliya qasabno fudud. Ka dib markii in, aad si xor ah u raaxaysatid files warbaahinta ku qabow, weyn Apple shaashadda TV .
1 Load DivX / files Xvid in this DivX / Xvid in Apple Converter TV
Free download app this, rakibi oo abuurtaan. Ka dib markii in, on your computer, furo gal meesha files DivX / Xvid ku kaydsan yihiin, ka dibna si toos ah jiidi aad files uu ka rabo galka barnaamijkan. Ama u tag "Beddelaan" tab> "Add Files" menu inay maraan galka iyo soo dhoofsadaan faylasha DivX / Xvid aad rabto.
2 Dooro qaab filaayo in TV Apple
Si aad u dooratid qaabka filaayo in sida qaab wax soo saarka, waxaad kaliya riix "Qaabka" icon dhinaca midig, uu furmo suuqa dhisayaa ilaa, doortaan "Apple TV" ikhtiyaarka ka "Device" ayuu> "Apple" category. Labada gebi ahaanba la jaan TV Apple.
Haddii u baahan tahay, waxa kale oo aad ka bedeli kartaa qaar ka mid ah saamayn video sida nuurka, bedelkeeda, saturation oo dheeraad ah, si ay u ugu fiican ka ciyaari kara TV Apple. Eeg talooyin tafatir dheeraad ah oo ka soo halkan .
3 Covnert DivX / Xvid in TV Apple
Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa kaliya in guji "Beddelaan" button ee geeska hoose ee midigta ah tan Video Converter . Waxaa la samayn. App Tani si toos ah u samayn kartaa wax ka nasasho kuu. Kafeega ah Waxaad heli kartaa meel ka baxsan ama sameeyo shaqooyin kale oo kaliya say u ordo ee asalka ah. Ka dib markii ay diinta ka, waxaad u baahan tahay riix muuqashada "Open Folder" si aad u ogaato faylasha wax soo saarka iyo ka dibna dajiyaan in Lugood aad u hagaagsan dheeraad ah si TV Apple. Waa intaas.
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan XviD / Divx in TV Apple